Advice & Support - Quit Partner
Talo iyo Taageero Guud-marka
Talo iyo Taageero Lacag La’aan ah 24/7
Marka Aad Diyaar Tahay, Halkan Ayaan Joognaa
Ma ugu baahan tahay caawimaad bilowga iska joojintaada ama sii wadideeda? Eeg macluumaadka hoos ku yaala si aad u hesho dhiirrigelin iyo talo kaa caawini karta inaad hesho qaab iska joojin oo adiga kuu shaqeeya.
U Diyaar Garowga
Badanaa dadka isticmaala tubaakada ganacsiga waxay ka fikiraan iska joojinta mar uun. Ka fikirida waxa kugu dhiirigelinayo inaad iska joojiso waa talaabada ugu horeysa ee ugu weyn. Markaad ogaato sababta aad u rabto inaad iska joojiso, way fududaanaysaa inaad diirada saarto faa’iidooyinka.
Hel Sababtaada ah Inaad Iska Joojiso
Miyaad dib ugu noqotay? Taasi waa ok. Waxay ku dhacdaa ku dhawaad qof walba. Waa kuwan qaar ka mid ah Tallooyinka kaa caawinaya dib-u-bilaabida ama sii wadida iska joojintaada marka ay sii wadidu adkaato.
Maalmaha qaarkood, iska joojinta waxay u muuqata mid ka adag maalmaha kale. Isku dhiirrigali si aad u sii wado iska joojinta sheekooyinka guusha ee dadka adiga oo kale ah.
Akhri Sheekooyinka Iska Joojinta
Noo Sheeg Taariikhdaada Joogtada ah
Baro sababta ay walxaha mentholka ah ay u fududahay in la bilaabo oo ayna adag tahay in la iska joojiyo – iyo sida shirkadaha tubaakada ay u bartilmaameedsadaan Dadka Madow, LGBTQ +, dhallinyarada iyo bulshooyinka kale.
Daawooyinka Iska-joojinta Lacag la’aanta ah
Waxaan ku siin doonaa oo lacag la’aan ah, sahay laba toddobaad oo ah dawooyinka iska joojinta, sida sharootada niikotiinka, xanjo ama lozenges-yada (18+). Wax badan ka baro mid kasta si aad u doorato kan kugu habboon.